फाल्गुन १३, २०७७ मा प्रकाशित
Posted by Apan Dainik - अपन दैनिक पत्रिका सिरहा on Wednesday, February 24, 2021
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन मिति टुंगो लागेपछि मधेस सम्मान यात्रामा निस्किएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग समसामयिक विषयमा पत्रकार सुरेन्द्र कुमार कामतिले गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको फैसला गरेको छ । यसलाई कस्तो लिनुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको निर्णयले देशलाई राजनीतिक अस्थितरताबाट जोगाएको छ । देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाएको छ । संविधानवादलाई बचाएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रमाथि जुन खतराको बादल मडरारिन लागेको थियो, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतले बचाउ गरेको छ ।
नेपालको अदालतले बेलाबेलामा जनता, संविधान र कानूनी राज्यको पक्षमा निर्णय गर्दै आएको छ ।
संसद पुर्नस्थापना भएपछि नेपाली काँग्रेसको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
काँग्रेस लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थितिरता, आएको परिर्वतनको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नु नै काँग्रेसको मुख्य ध्येय रहेको छ । काँग्रेस अब संसदीय प्रकृयालाई अगाडी वढाएर लोकतान्त्रिक पद्धति, संसदीय पद्धतिको जर्गेना गर्नतर्फ लाग्छ ।
संसदीय प्रकृया ठिकसँग चल्नुपर्छ । त्यसैमा नेपाली काँग्रेसको भूमिका रहन्छ ।
नयाँ सरकार गठनको केन्द्रविन्दुमा नेपाली काँग्रेस देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्छ ?
नेपाली काँग्रेसलाई अहिले कुर्सीको मोह छैन् । हामी बहुमत ल्याएर तीन तहको निर्वाचनबाट सक्तामा जान चाहन्छौ । अहिले कुनै हतार छैन् । अहिले संसदीय प्रणालीको प्रकृया अगाडी वढ्न सहयोगी मात्रै हो ।
जनताले हामीलाई सक्तामा जाने म्यान्डेड दिएको छैन् । हामी आफ्नो ठाउँमा रहेर यो प्रणालीलाई कसरी जर्गेना गर्ने त्यस प्रयास केन्द्रित हुन्छौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन काँग्रेसले भूमिका खेल्छ ?
संसद विघटनको सिफारिस सदर गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको वारेमा काँग्रेसले सल्लाह गर्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले दिएको सिफारिसलाई स्वीकृति गर्ने बाहके अर्को विकल्प छैन् । यद्यपी केही समय पर्खिएर सुझाव लिनु पर्नेथ्यो । त्यो नगरेर एकै पटक स्वीकृति दिएको छ ।
हतारमा राष्ट्रपति पदको गरिमालाई ख्याल गर्न सकेनन् । संविधानको संरक्षणकको हैसियतको महत्व दिन र पालना गर्न चुकेको छ । नेपाली काँग्रेसले महाअभियोगको प्रस्तावको वारेमा अहिले सोचिरहेको छैन् ।
प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धमा नेपाली काँग्रेसको रोल के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्ने भएपछि काँग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिन्छ । यो राजनतिक धर्म हो । नेपाली काँग्रेसले विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्छ । र आफ्नो धर्मलाई निरन्तरता दिन्छ ।
पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुन्छ त ?
काँग्रेस पार्टीको महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुन्छ । क्रियाशिलत सदस्यता ठाउँठाउँबाट आईरहेको छैन् । ठाउँठाउँमा विवाद छ । कुनैपनि हातलमा महाधिवशेन हुन्छ, हुनुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसले युवापुस्तालाई कतिको अवसर दिन्छ ?
युवापुस्ता पार्टीको नेतृत्वमा आईरहेको छ । केन्द्रिय सदस्य, महामन्त्री, सहमामन्त्रीमा युवाहरु आईरहेको छ । युवाहरुलाई प्रस्तस्त ठाउँ छ ।
तपाईलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि के गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री पदवारे आफ्नो कुनै सोच छैन । म संसदमा पनि होईन । यहाँ ब्याकडोरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने चलन छ । माधव नेपाल दुई ठाउँबाट हारेर पनि प्रधानमन्त्री बनेको छ । मलाई त्यस्तो कुरामा अभिरुची छैन् । चुनाववाट देशको बागडोर सम्हाल्नु पर्यो भने बेग्लै कुरा हो । होईन भने पदमा रहेर विटुलिन मन छैन् । मुलुकको लागि केही गर्न चाहन्छु । राष्ट्रको लागि काम गर्न चाहन्छु ।
काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
काँग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि के गर्ने त्यो भन्न सकिदैन् । त्यो उहाँको कुरा हो । के गर्नुहुन्छ, त्यो थाहा छैन् । भरसक काँग्रेस फलोरमै बसेर कसैलाई समर्थन दिन सक्छ । कसैसँग कुरा मिल्यो, तुलनात्मक रुपमा जो सँग एजेन्डा मिल्छ त्यसलाई फलोरबाट समर्थन दिदा काँग्रेसको कल्याण हुन्छ ।
नेकपाको कुन समूहलाई काँग्रेसको समर्थन रहन्छ ?
नेपाली काँग्रेसको एजेण्डासँग कुरा मिल्नेसँग समर्थन रह्न्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तत्कालै कुरा मिल्ने सम्भावना कम छ । उहाँले उपद्रो गर्नुभयो । त्यस्तो अवस्था, आलो घाउमा सर्पोट गर्ने कुरा गाह्रो पर्ला ।
त्यसो त राजनीतिमा परमानेन्ट शत्रु कोही हुँदैन त्यसैले भविष्यमा कुरा मिल्न सक्छ । अहिले तत्काल त्यस्तो सम्भावना देख्दिन् ।
संवैधानिक नियुक्ति निकायमा भागबण्डा गरि हुने नियुक्तिलाई कस्तो लिनुहुन्छ ?
विभिन्न संवैधानिक निकायमा अवैधानिक, असंवैधानिक, बल मिचाई गरी सिद्धान्त विपरीत भागबण्डामा नियुक्ति गरियो । त्यो गलत थियो । त्यसलाई अदालतले फालदियो । ठिक गर्यो ।
सही मान्छे देशलाई चाहिन्छ । संवैधानिक निकायलाई चाहिने क्वालिटीको मान्छेहरु राख्नुपर्छ ।